Minisitry ny Fitsarana : “Atokisana ny fitsarana ny ady amin’ny kolikoly” | NewsMada
Minisitry ny Fitsarana : “Atokisana ny fitsarana ny ady amin’ny kolikoly”
“Mahasahia mijoro ao anatin’ny fahamendrehana. Fa arakaraka ny fahasahiana mijoro sy mandeha tsy handraraka ilo mby an-doha ary miezaka hanao tsaratsara kokoa no hiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka. Satria mba hiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana ny ady amin’ny kolikoly.”
Io ny hafatry minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Johnny Richard, ho an’ny mpitsara sy ny mpandraharaha ny fonja momba ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny minisitera tantaniny. Misy ny tsy mety ataon’ny fitsarana sy ny mpitsara ary misy tsy mety ataon’ny mpandraharaha fonja fa misy koa ny mety: miezaka miady amin’ny kolikoly ary ezaka amin’ny fanatsara ny asa atao.
Ao anatin’ny fahasarotana ny ady…
Ao anatin’ny Velirano nataon’ny filohan’ny Repoblika ary efa nezahin’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana ny ady amin’ny kolikoly, na eo aza ny fahasarotana. Betsaka ny milaza sy manatsatso fa resabe ny ady amin’izay, ary tsy misy ny hetsika amin’izany. Fanakianana entina manatsara zavatra izay, misy ny marina na tsia. Ny azony antoka amin’ny ankapobeny ary amin’ny ankamaroany efa miezaka amin’ny ady amin’ny kolikoly ny eny amin’ny Fitsarana sy ny fitantanana ny fonja.
Anjaran’ny vahoaka manontolo ny ady amin’ny kolikoly
Na teo aza ny fahasahiranana, tao anatin’izay dimy volana izay, vokatry ny ahiahy sasantsasany noho ny faharatsian’ny fitantanana. Nataony ho ohatra amin’izany ny zava-nitranga tany Manakara sy Moramanga. Na lazaina ho maromaro aza izany, vitsy eo anoloan’ny zava-misy. Ary izay ezaka nampihena azy izay ny fampirisihana atao ho an’ny rehetra.
Na izany aza, notsiahiviny fa tsy anjaran’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana irery ny ady amin’ny kolikoly, fa anjaran’ny vahoaka iray manontolo.